Onye na-emepụta China na-eweta PIM Mịnịstrị nke mmiri, Zirconia Powder Kneader, Ceramic Powder Diserion Mixer.
Nkọwa:Mgbasa ozi PIM,Zirconia Powder Kneader,Igwe ihe eji eme mmiri Ceramic Powder,Titanium Alloy ntụ ntụ igwekota,,
Home > Ngwaahịa > Mgbasa Gburugburu > Mgbasa ozi PIM
Ngwaahịa nke Mgbasa ozi PIM , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Mgbasa ozi PIM , Zirconia Powder Kneader suppliers / factory, wholesale high-quality products of Igwe ihe eji eme mmiri Ceramic Powder R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
25 Literik Mkpochapu onodu gburugburu ebe obibi maka ndi na edo erimeri  Kpọtụrụ ugbu a
MIM ntụ ntụ 20 Liters ntụ ntụ na-egosi ihe igwekota  Kpọtụrụ ugbu a
15 Liters Diskion Kneader maka igwe eji akpu ikuku  Kpọtụrụ ugbu a
12 Liters precise Kneader maka Pọder Metallurgy  Kpọtụrụ ugbu a
10 Liters Mkpokọta igwe MIM  Kpọtụrụ ugbu a
6 Liters Kneader maka Ceramics na PLC  Kpọtụrụ ugbu a
5 Liters Obere Ipo Kneader maka igwe eji akpu ikuku  Kpọtụrụ ugbu a
3.8 Liters Obere Ipo Kneader maka Peramic powder  Kpọtụrụ ugbu a
3 Liters Lab Kneader maka Peramic powder  Kpọtụrụ ugbu a
2 Liters Ceramic Internal Mixer maka Lab  Kpọtụrụ ugbu a
0.8 Liters Zirconia Powder Dispersion Kneader  Kpọtụrụ ugbu a
1 Liter Titanium Alloy ntụ ntụ Kneader  Kpọtụrụ ugbu a
Oge mmuta 0,5 Liters MIM  Kpọtụrụ ugbu a
0.3 Liters Disasion Kneader maka PIM / CIM  Kpọtụrụ ugbu a
Nchọgharị 0.2 Liter PIM  Kpọtụrụ ugbu a
0.1 Liter Kneader maka ịkpụzi ntụ ntụ ntụ  Kpọtụrụ ugbu a
25 Literik Mkpochapu onodu gburugburu ebe obibi maka ndi na edo erimeri
LINA 25 Liters Eco-Friendly Dispersion Kneader maka ntụ ntụ Elu igwe nke Eco-Friendly Dispersion Mixers maka CIM na MIM na-ejikọta ihe ndị ahụ ozugbo nwere ike ịlele enyo nke nwere ike ijide n'aka na enwere ike ịsachasị ihe ndị ahụ na-enweghị...
MIM ntụ ntụ 20 Liters ntụ ntụ na-egosi ihe igwekota
LINA 20 Liters Powder Proof Kneader maka MIM Powders Nke a na ụdị 20L Dispersion Ịgwakọta Machines maka Powder efe Materials bụ ike izute nnukwu ina na taa CIM na MIM ụlọ ọrụ. Ihe omimi nke LINA maka inye ndi mmanu mmanu di elu nwere ike cleanchapu...
15 Liters Diskion Kneader maka igwe eji akpu ikuku
LINA 15 Liters Egosi ihe ngbochu anya nke igwe eji eme ala LINA Dust Proof Kneader dị mma maka ụdị CIM na ihe ntụ ntụ MIM dị iche iche nwere njiri anụ ahụ dị iche. Maka ihe ndị siri ike, tungsten carbide nwere ike ịmịnye ya n’elu rotors na ịgwakọta...
12 Liters precise Kneader maka Pọder Metallurgy
LINA 12 Liters precise Kneader for Powder Metallurgy Ofdị Ngwakọta Predị Ngwakọta nke Precise Labs maka Powders nwere ike imezu nnukwu ihe chọrọ na ụlọ ọrụ metallurgy taa (PM). Igwe mmịnye nke LINA maka Ceramics na ntụgharị uche nwere ike ihicha ihe...
LINA 10 Liters Mpempe igwe MIM Elu igwe nke Mental Injection Molding (MIM) na -enwe ihe ozugbo na ihe ndị ahụ nwere ike enyo enyo nke na -eme ka ihe ndị ahụ dị mfe ihicha ya na-enweghị nnyapade ma zere usoro na-efu na mmetọ. Igwe mmịnye LINA maka...
6 Liters Kneader maka Ceramics na PLC
LINA 6 Liters Kneader for Ceramics with PLC Ihe atụ a nke CIM Dispersion Kneader ' s cangwakọta rotors na-agwakọta site na thegwakọta ọnụ ụlọ kpamkpam. Maka ihe ndị siri ike, tungsten carbide nwere ike ịmịnye ya n’elu rotors na ịgwakọta ụlọ iji...
5 Liters Obere Ipo Kneader maka igwe eji akpu ikuku
LINA 5 Liters Obere Mode Nke a na ụdị 5 lita ụlọ nyocha Dispersion agwa maka Efere Materials na-enwe ike izute nnukwu ina na taa Efere Powder Ọgwụ (CIM) ụlọ ọrụ. T ọ agwakọta-ulo na rotors nke Lina PIM Dispersion Ịgwakọta Machine maka Efere powders...
3.8 Liters Obere Ipo Kneader maka Peramic powder
LINA 3.8 Liters Obere Mode Nke a na ụdị ụlọ nyocha Dispersion Ịgwakọta Machine maka Mental ntụ ntụ bụ ike izute nnukwu ina na taa CIM (Efere Powder Ọgwụ) ụlọ ọrụ. Ngwakọta Ngwakọta Ngwakọta nke Mfe Dị Iche nke LINA maka Ceramic Powders nwere ike...
3 Liters Lab Kneader maka Peramic powder
LINA 3 Liters Lab Kneader maka Peramic powder Nke a na ụdị ụlọ nyocha Dispersion Ịgwakọta Machine maka Mental ntụ ntụ bụ ike izute nnukwu ina na taa MIM ụlọ ọrụ. Maka ihe ndị siri ike, Tungsten carbide nwere ike ịgbanye elu nke rotors na ịgwakọta...
2 Liters Ceramic Internal Mixer maka Lab
LINA 2 Liters Ejiri Igwe Nweta Igwe Ihe nlere nke Ceramic Internal Mixer 's s agwakọtara ụlọ na rotors na ihe pụrụ iche. A pụrụ ịkpụgharị carbide Tungsten n’elu ndị na-akwọ ụgbọ mmiri ma na-agwakọta ọnụ ụlọ ma ọ bụ ihe ndị siri ike iji zere...
LINA 0.8 Liters Zirconia Powder Dispersion Kneader LINA 0.8 Liters Zirconia powder Diserion Mixer dị mma maka nnukwu seramiiki na arịa ntụ ntụ. On nzube nke mfe ihicha na ezere ihe onwunwe usoro furu efu, nke a na ụdị Dispersion Kneader 's...
1 Liter Titanium Alloy ntụ ntụ Kneader
LINA 1 Liter Titanium Alloy ntụ ntụ Kneader LINA 1 Liter Titanium Alloy Dispersion Kneader dabara adaba maka ụdị seramiiki na ụrọ iche iche. Ihe atụ a nke Dispersion Mixer 's s cangwakọta rotors pụrụ iche na chagwakọta ụlọ kpamkpam maka ihicha...
Oge mmuta 0,5 Liters MIM
LINA 0.5 Liters MIM gbasara mgbasa LINA 0.5 Liters Igwe anaghị agba nchara dị mma maka ihe dị iche iche nke seramiiki na nke ntụ ntụ. Ihe atụ a nke Dispersion Mixer 's s A pụrụ ịkasị ụlọ ahụ siri ike chrom a gwakọtara agwakọ. Ofdị Obere Rubdị...
0.3 Liters Disasion Kneader maka PIM / CIM
LINA 0.3 Liters Disnesion Kneader maka CIM / PIM Thegwakọta ahụ na-agagharị na rotors LINA PIM Dispersion Mixer enwere ike ikewapụ ya kpamkpam. Ọzọkwa, elu mmiri niile emetụtara ihe ndị ahụ bụ enyo enyo nke nwere ike ịgba mbọ hụ na a ga-asachasị ihe...
Nchọgharị 0.2 Liter PIM
LINA 0.2 Liters PIM gbasara ogbaaghara LINA 0.2 Liters CIM / MIM N'ime Kneader dị mma maka ọtụtụ seramiiki na ụrọ ntụ ntụ. The agwakọta rotors nke t nlereanya ya nke Dispersion Kneader 's enwere ike ikewapụ ya kpamkpam na ụlọ agwakọta....
0.1 Liter Kneader maka ịkpụzi ntụ ntụ ntụ
LINA 0.1 Liter Kneader maka ịkpụzi ntụ ntụ ntụ LINA 0.1 Liter CIM / MIM Mịnịstrị na-eme ka ọ dị mma maka ọtụtụ seramiiki na ụrọ ntụ ntụ. Ihe atụ a nke Dispersion Mixer 's s cangwakọta rotors na-agwakọta site na thegwakọta ọnụ ụlọ kpamkpam. Usoro...
China Mgbasa ozi PIM Ngwa
LINA PIM Mgbapu Kneader (CIM & MIM)
Ihe omuma nke LINA PIM Mgbakọ mmesara:
(1) nkọwapụta nke rotor, elu na ala ebuli ebuli kachasị elu iji hụ na mmetụta nsonaazụ na akụrụngwa anụ ahụ rute nsonaazụ kacha mma.
(2) Nguzosi ike siri ike
1. A na-eji ọla nchara agbanye brọdụ rotor a na-ahụ anya iji hụ na ha dị mfe ma dịgide adịgide. A na-eji 38CrMoAL na ọgwụgwọ HV950-1050 arụ ọrụ rotor, omimi nke 0.6-0.75 mm, isi ya adịghị elu karịa ọkwa 11 iji jide n'aka na ike siri ike nke rotor, nwere ikike dị elu, ike iyi, ike na-aga n'ihu, nnyefe na-aga n'ihu na nnyefe kwụsiri ike. .
2. Akụkụ mmiri niile nke nwere ihe metụtara ya na-abụkarị site na tungsten carbide. A na-esi na Germany ebubata ngwa ịgba mmiri, ọsụsọ na-akpaghị aka, ebe a na-emechi akwụkwọ. A na-ebubata alloy carbide Tungsten, ma wearable nke ihu ya dị okpukpu iri karịa elu igwe na-etinye chrome. Usoro ịgba ahụ dị n'okpuru okpomoku dị elu 1500 ℃ ma ọsọ ịgba dị na ọsọ ọsọ iji hụ na ngbanye elu dị ka 75N / cm². Teknụzụ arụkọtara arụpụtala ọkwa nke ụwa.
Nkọwapụta igwe na igwe igwe nri LINA PIM
Isi ihe nke LINA PIM Internal mixer
1. Ugbo ala di ike nke oma juputara na ngwa di iche iche tinyere seramiiki na ikike iche echiche.
2. Igwe pọmpụ na-agba ume nke ukwuu na-agbado nnukwu ikike ịpịgharị ọnụ na ihe ndị eji egbu mmiri.
3. Ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu nke ndị na-agbatị LINA nwere ike iru 400 ℃ , na-eme ka o kwe omume ịgwakọta ụdị ihe ọhụụ.
Mgbasa ozi PIM Zirconia Powder Kneader Igwe ihe eji eme mmiri Ceramic Powder Titanium Alloy ntụ ntụ igwekota 25 L Mgbasa Ozi Kneader